बाबुरामका नेता उपेन्द्र र राजेन्द्र ! मधेशवादी दलमा पनि पदकै झगडा ! – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » राजनीति » समाचार » समाज अंक: 5205
बाबुरामका नेता उपेन्द्र र राजेन्द्र ! मधेशवादी दलमा पनि पदकै झगडा !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र पूर्व राजपा समूहको झगडाले गर्दा पार्टी थप भद्रगोल बन्दै गएको थाहा भएको छ । गुट र उपगुटको महासंघ जस्तो बनेको जसपाले केन्द्रीय सदस्य त बनाउन सकेको छैनन् नै संख्या निर्धारण गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको स्रोत बताउछ ।
७०१ जनाको केन्द्रीय सदस्यमा जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले पाउने ३५० जनाको संख्या र नाममा अहिले कुनै विवाद छैन । तर, उपेन्द्रले नै अर्को समूहमा खेलिदिएपछि थप रडाको सुरु भएको बताइन्छ । पूर्वराजपाबाट पनि ३५० जना केन्द्रीय सदस्य हुने भनिएको छ ।
त्यसै अनुसार राजपाका पूर्व गुट अर्थात् ६ समूहमा संख्या बाँडफाँड गर्दा राजकिशोर यादव, अनिल झा र महेन्द्रराय यादव समूहको अडानले बिबाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफुहरुले कम संख्या लिन लचिलो हुँदै उनीहरुलाई मनाउने भन्दै संख्या थपिदिएको स्रोत बताउछ ।
त्यसमा पनि चित्त नबुझाएका उनीहरुले अहिलेसम्म नाम बुझाएका छैनन जसले गर्दा जसपाको केन्द्रीय समिति विस्तार नै रोकिएको छ । जसपाका एक नेता अनिल झा र राजकिशोरले आफ्नो समूहका भन्दै उपेन्द्र यादवका मान्छेहरुलाई केन्द्रीय समितिमा सिफारिश गरेपछि पूर्व राजपाभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो ।
पूर्व राजपा सम्बद्ध ती नेताको दावीमा उपेन्द्र यादलले उनीहरुलाई आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई सिफारिश गर्न उक्साएका जिकिर छ । त्यसैकारण महन्थ ठाकुुर, राजेन्द्र महतो र शरत सिंह भण्डारी समूहले नाम टुंगो लगाएपछि उनीहरुसँग नाम मागिएको थियो ।
राजपाको एकल सूची प्रस्तुत गर्ने सोचमा ठाकुर र महतोले नाम मागेको भए पनि झा र राजकिशोरले सूची दिन नमानेको स्रोत बताउछ । बरु, आफूहरुले एकैचोटी बैठकमा पेश गर्ने भन्दै अडानमा छन् । त्यसैकारण अहिलेसम्म राजपाको पूर्वसमूहमा लफडा भइरहेको छ ।
राजकिशोर र अनिलको समूहलाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोेले सुरुमा २७/२७ जना केन्द्रीय सदस्य भागमा पारिदिएका थिए । उनीहरुले विवाद निकालेपछि ३० जना पु¥याइदिए । त्यसमा पनि पहिलाको केन्द्रीय सदस्यभन्दा बाहिरका र अन्य पार्टी र समूहका व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने भएपछि विवाद चर्किन थालेको जसपाका नेताहरु बताउछन् ।
जसपाले केन्द्रीय समिति मात्रै ७०१ जनाको बनाउदैछ भने संघीय परिषद् मा १ हजार १ सयभन्दा बढी हुनेछन् । संघीय परिषद्को अध्यक्ष भने बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने सहमति जुटेको छ । त अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीकाे हैसियतमा रहेका बाबुराम जसपाको वरियतामा ४ नम्बरमा रहेका छन् ।
संघीय परिषद्को अध्यक्ष बाबुराम भएपनि वरियता फेरबदल हुने कि नहुने टुंगो छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सांसद बाबुराम भट्टराईभन्दा अघि राजेन्द्र महतो महन्थ र उपेन्द्र यादव रहेका छन् ।